ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရေး တရုတ်-ရုရှား အင်တာနက်မီဒီယာဖိုရမ် ကျင်းပ - Xinhua News Agency
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရေး တရုတ်-ရုရှား အင်တာနက်မီဒီယာဖိုရမ် ကျင်းပ
သမ္မတဦးဝင်းမြင့် နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို သတ်မှတ်ပြစ်ဒဏ်များ လျှော့ပေါ့ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်
ဖမ်းဆီးခံထားရသော မြန်မာသမ္မတဦးဝင်းမြင့် နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ထောင်ဒဏ် ၄နှစ်စီ အမိန့်ချမှတ်၊ မူလနေရာတွင်သာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဟုဆို
မကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည့် တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းအား သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က အလွန်ဂရုစိုက် အလေးထားခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၂၂၈ ဦးလိုက်ပါလာသော စက်လှေတစ်စီးဖမ်းမိ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၌ ငွေကျပ် ၂.၂၁ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်အတွင်း လျှောက်ထားရမည်
အခြေခံပညာကျောင်းများ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်
ချင်းပြည်နယ်တွင် အင်အား ၆.၀ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှား ၊၂၀၂၁ ခုနှစ်ထဲတွင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသော ငလျင်လှုပ်ရှားမှု ၁၀ ကြိမ်ရှိ
ကျိုက်နဲ ရေလယ်ဘုရားသွားဖူးသူများ ပင်လယ်ရေနှင့် မျောပါမှုဖြစ်ပွားပြီး၊ အလောင်း ၁၅လောင်းဆယ်ယူရရှိကာ ပျောက်ဆုံးနေသူများအား ဆက်လက်ရှာဖွေနေ
ပန်းချီကားချပ်သဖွယ် သာယာလှပသော ဝူရီဆန်းတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ်
စီးတီးတက္ကစီယာဉ်ပိုင်ရှင်များအသင်းအား YRTC ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသားဘောလုံးအသင်း တူရကီနိုင်ငံ၌ ခြေစမ်းပွဲ သုံးပွဲကစားမည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ CERES-1 Y2 စီးပွားဖြစ်ဒုံးပျံဖြင့် ဂြိုဟ်တု ၅ လုံး လွှတ်တင်
Shenzhou-12 အာကာသယာဉ်မှူးများ က ကနဦးပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီးနောက် စာနယ်ဇင်းများနှင့် တွေ့ဆုံ
ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အမေရိကန်၏ အရည်အချင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မေးခွန်းထုတ်
တရုတ်နိုင်ငံက အသေးစားနှင့် အလတ်စား လေဆိပ်များချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေး ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် AI ရှေ့ပြေးဇုန် ၁၇ ခု တည်ဆောက်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝူဟန့်မြို့၌ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးကုန်စည်ပြပွဲ ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရှေးအကျဆုံးဟုယူဆရသော နှစ်ပေါင်း ၉၉,၀၀၀ သက်တမ်းရှိ အရိုးလက်နက်ကိရိယာအား တူးဖော် တွေ့ရှိ
စိန်ယန်နန်းတော်ပြတိုက် ၉၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ
တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်းရှီး ပြည်နယ် ထိုက်ယွမ်မြို့တွင် နှစ်ပေါင်း ၅,၅၀၀ သက်တမ်းရှိ ပဉ္စဂံအသွင်ရှိ အဆောက်အဦနေရာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
“ကမ္ဘာ့စွဲမက်ဖွယ် စားကောင်းသောက်ဖွယ်မြို့တော်”အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းဆူးပြည်နယ် ဟွိုင်အန်းမြို့အား ယူနက်စကို ရွေးချယ်
ကွေ့ယန်-နန်နင်း မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ အရှည်ဆုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း အူတိုင်တစ်လျှောက် ဥမင်ငယ် ဖောက်လုပ်ပြီးစီး
ကူမင်မြို့မှ ထွက်ခွာလာသော ပထမဆုံး တရုတ်-လာအို အမြန်ကုန်တင်ရထား ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ရောက်ရှိ
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ကုန်တင်ရထားသည်် မိုဟန်ရထားလမ်း နယ်စပ်ဂိတ်ဖြတ်ကျော်ကာ လာအိုသို့ ပြေးဆွဲ
တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြသည့် ကုမ္ပဏီများကို လာအိုအစိုးရက ဂုဏ်ပြုချီးကျူး
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ မီးရထား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ပထမဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ရှီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ သွားရာလမ်းမကြီးများ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သော သစ်ခွမျိုးစိတ်သစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဒေသတွင် ယခုနှစ် ၁၀ လကြာကာလအတွင်း လမ်းဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏ ယွမ် ၆၃.၅ ဘီလီယံရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီယား Xilin Gol မြက်ခင်းပြင်တွင် ဆီးနှင်းများကျဆင်းပြီးနောက် မြင်ကွင်းများ
ရေနှင့်မြေဆီလွှာထိန်းချုပ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် မြစ်ဝါမြစ် ဂေဟစနစ် ကောင်းမွန်လာသည်မှာ ပိုမိုသိသာထင်ရှားလာ
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကောင်းမွန်မှု ၊ ထိရောက်မှု သေချာခိုင်မာစေရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းချက်များ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn တို့ တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရှီနှင့် ထောင်လွန်းတို့ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းဖွင့်ပွဲတက်ရောက်
တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသစခန်းမှ ဖွင့်လှစ်သော “Tiangong Classroom” ၏ ပထမဆုံးသော အာကာသ သင်ကြားပို့ချမှုကို မကြာမီကာလအတွင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်
သမုဒ္ဒရာနက်ပိုင်း စူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်မှ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သုတေသနသင်္ဘော Tansuo-1 ပြန်လည် ရောက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသည့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ချီလျန်ဆန်းတောင်တန်း တောင်ခြေရှိ နှစ်တစ်ထောင် မြင်းမွေးမြူရေးစားကျက်နှင့် မြန်နှုန်းမြင့်ကျည်ဆန်ရထား၏ ဆုံစည်းမှု
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ပင်းချွမ်းခရိုင်တွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ၃ ရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား တစ်ပြိုင်တည်း အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီ နှင့် လာအိုနိုင်ငံ သမ္မတ သောင်လွန်းတို့ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ယန်-ဟွမ်ဖိန် အမြန်လမ်းပေါ်ရှိ ယန်ပေါင်ဆန်းအထူးတံတားကြီး၏ ငြိမ်သက် ဝန်တင်အား စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခို ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ကျေးရွာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် မီးထွန်းခြင်းပြုလုပ်
ကမ္ဘာတွင် အလွန်လှပတင့်တယ်ပြီး အမှတ်တရဖြစ်စေမည့် အိုလံပစ်အားကစားပွဲကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံက ကျင်းပသွားမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ၊ပေကျင်းမြို၌ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် မီးလျှံကို အိုလံပစ်တာဝါ တွင် ပြသ
အမေရိကန် နှင့် ရုရှားခေါင်းဆောင်တို့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတဆင့် ယူကရိန်းအခြေအနေ နှင့် အခြားကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Semeru မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၄ ဦးထိ မြင့်တက်လာ
အိန္ဒိယ-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ နယူးဒေလီတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂,၅၀၀ကျော်က “ရွှေသားလျှာ”ပါ မံမီရုပ်ကြွင်း နှစ်ခုအား တူးဖော်တွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံမှ တည်ဆောက်ထားသော မော်စကို မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများ ကို အများပြည်သူအသုံးပြုရန် စတင်ဖွင့်လှစ်
ပေကျင်းအိုလံပစ်ကို အမေရိကန်က “သံတမန်ရေးရာ သပိတ်မှောက်” ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို တိုက်ရိုက် “နိုင်ငံရေးပြက်လုံးထုတ်ခြင်း ” ဖြစ်ဟု ကုလကိုယ်စားလှယ်ပြော
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ခံယူရန် မလိုလားသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၄,၀၀၀ ကျော်ဆန္ဒပြ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ဆုံးအသုတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီး မြစ်ထဲထိုးကျမှုတွင် သေဆုံးသူ ၃၂ ဦးထိ မြင့်တက်
အီရန်နျူကလီးယားဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “တင်းတင်းမာမာ” ဆောင်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများအား အစ္စရေးတောင်းဆို
ဆီးရီးယား အိုလံပစ် ကော်မတီက “အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှု” ကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် တရုတ်နှင့် တညီတညွတ်တည်းရှိကြောင်း ကြေညာ
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့က ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းရှိ ရေနံတွင်းလုပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လူ ၁၀ ဦး သေဆုံး
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၂၂ ဦးထိ ရှိလာ ၊ ၃၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံက AK-203 ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်သေနတ်များ ဝယ်ယူရန် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်က အရပ်သားများအား မှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား
UAE က ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ယူရို ၁၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော Rafale တိုက်လေယာဉ် အစင်း ၈၀ မှာယူ
လူအသေအပျောက်ရှိခဲ့သော ယာဉ်မတော်တဆမှုတွင် ၎င်း၏ယာဉ်မောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် ပေါ်တူဂီဝန်ကြီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်
အစ္စရေးနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ မွေးမြူရေးခြံ တစ်ခု၌ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်
ပူတင်နှင့် ဘိုင်ဒန် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် မကြာမီတွေ့ဆုံနိုင်
တရုတ်နိုင်ငံက အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ပြော
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်အနီး သေနတ်သမားနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပွား
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ ကျောက်လိုဏ်ဂူပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံး
အမေရိကန်လေတပ်က မြို့ပြလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအား ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ ပြောကြား
အမေရိကန်နိုင်ငံ စာသင်ကျောင်းဝင်းတစ်ခုတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား၊ လူ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၈ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
ထိုင်ဝမ်အား “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး” တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဖိတ်ကြားမှုကို တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် ကိုဗစ်လူနာသစ် ၄၀,၉၄၁ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
အမေရိကန်တွင် ထရပ်ကားယာဉ်မောင်း ရှားပါးလာသဖြင့် ပြည်သူများအကြား ကားမောင်းသင်ရန် စိတ်အား ထက်သန်နေ
ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ၃ လကြိုတင်၍လျှောက်ထားနိုင်
ယူကရိန်းက အရှေ့ပိုင်းတွင် စစ်အင်အားတိုးမြှင့်ချထားကြောင်း ရုရှားက ပြောကြား
ရုရှားက လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မော်စကိုမြို့၌ ၃ နှစ်ကျော်နေထိုင်ပြီးသော အမေရိကန်သံတမန်များကို နှင်ထုတ်
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာသူ အားလုံးအတွက် COVID-19 ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း စစ်ဆေးမှုရလဒ် လိုအပ်သည်ဟု ကြေညာ
တူရကီနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၌ လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၆ ဦးသေဆုံး
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နှင့် ရုရှား အင်တာနက်မီဒီယာများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရေး နှင့် ဖလှယ်မှုများ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဖိုရမ်တစ်ခုအား နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖလှယ်မှုများ နှင့် အပြန်အလှန်သင်ယူမှုများအား မြှင့်တင်ခြင်း ၊ လက်တွေ့ကျသည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို နက်ရှိုင်းစေခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်-ရုရှား အင်တာနက်မီဒီယာဖိုရမ်အား ပေကျင်းမြို့နှင့် မော်စကိုမြို့တို့၌ ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Cyberspace အစိုးရအဖွဲ့ လက်ထောက်အကြီးအကဲ Niu Yibing က နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြည်သူအချင်းချင်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးတို့တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရေး နှစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အင်တာနက်မီဒီယာများအား တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာများ နှင့် အင်တာနက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သာမက ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ပညာရှင်များသည် အွန်လိုင်း နှင့် အော့ဖ်လိုင်း ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်အား China Daily နှင့် China Internet Development ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China-Russia internet media forum held to strengthen cooperation
BEIJING, Nov. 23 (Xinhua) — A forum intended to promote exchanges and strengthen cooperation between Chinese and Russian internet media outlets was held Monday.
Under the theme — Promoting Exchanges and Mutual Learning, Deepening Practical Cooperation — the 2021 China-Russia Internet Media Forum was held via video link in Beijing and Moscow.
Niu Yibing, deputy head of the Cyberspace Administration of China, called on internet media outlets in both countries to strengthen cooperation, and contribute to people-to-people and cultural exchanges between the two countries.
Representatives from regulatory departments, online media outlets, and internet enterprises, as well as experts and scholars from both countries participated in the forum online and offline.
The forum was co-hosted by China Daily and the China Internet Development Foundation. Enditem
Photo – Denis Perepelitsyn, head of communications of SPB TV, speaks at the 2021 China-Russia Internet Media Forum via video link on Nov 22, 2021. [Photo by Wang Zhuangfei/chinadaily.com.cn]
ဒုက္ခသည်များ နေရာရွှေ့ပြောင်းရန်သာရှိပြီး ထွက်ခွာပြန်လှည့်မည့်အလားအလာမမြင်ခြင်းကြောင့် ပိုလန်-ဘီလာရုဇ် နယ်စပ်ဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်း မဖြေရှင်းနိုင်သေး
တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းခြင်းက ဒေသတွင်း စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်